Xasuusasho Aan Koobnayn – Si feejignaantu kuugu suurto gasho raac waddooyinkaan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Feejignaantu waa wadada xasuusta. Saamaynta togan aad leedahay xasuusashada saxda ah waxaa ka qayb qaata xoog saarida iyo ujeeddo fahanka waxaad akhrisay ama shaqadaad qabatay. Si feejignaantu kuugu suurto gasho raac wadadaan.
1. Iska ilaali ka mashquulka shaqadaad qabanaysid
Dadku feejignaan badan Masiiyaan markey shaqo hayaan ayna ka fakarayaan shaqo kale feejignaantu iyo usoo jeedka shaqadu ama wax akhrisku ma qayb samo, awalbaa soomaalidu horey u tiri “laabi labo maleh”.
Shaqada aad gacanta ku haysid u feejignow, mobile iyo TV iska dami markaad rabtid inaad wax akhrisatid rabtana maskaxdaada inay galaan waxaad akhrisay.
2. samayso xilli nasasho iyo shaqo kooban
Markii aad shooqooyin badan miiska kuusaaran yihiin, waqti sax ah oo aad qabatidna aysan jirin waad Ku wareeraysaa maskaxdaaduna waxay kugu khasbeysaa inaad joojisid wax akhriska, wayna kugu adag tahay inaad xasuusatid waxaad akhrisay ama shaqadaad qabatay waqti ka dib.
3. Maamul wakhtigaaga
Waqtigaaaga oo si sax u maamushid waxuu keenaa usoo jeedka iyo muhiimad saarka wax akhriskaaga ama shaqadii kale oo aad rabtid inaad qabatid.
Inaad wakhti gaar ah usamaysid shaqada gaar ka aad qabanaysid, waxay baraarujisaa dhiirigalisaana maskaxdaada iyo xusuustaada, waxayna kuu sahlaysaa in maskaxdaadu keento xirfaddo si ay udhamayso shaqadadaan.
Bilow shaqada adigoo wakhti ay ku dhamaato ku xisaabtama waxayna suurto galinaysaa in shaqada wakhti yar ku dhamaysid, kuuna sahlanaato.
4. Cun cunto sax ah
Cunnada dhamays tiran(balance diet) waxay si muhiima uga qayb qaadataa xoojinta xusuusta,nafaqada aad ka heshid cunnada waxay kiciyaan, siyaadiyaan, cariyaanna xasuusashada(memory) sida kaluunka, cuntooyinka feetamiinka leh, qudaarta iyo ukunta.
5. Seexo hurdo kugu fillan
Hurdo la’aan tu waxay keentaa xifdin la’aan iyo xasuusasho xumo, Hurdo la’aantu waxay keentaa awood darro, haddii aadan seexan hurdo kugu fillan, waxaa yaraanaysa feejignaanta iyo usoo jeedka wax akhriska, maskaxdaaduna sidii maskax daalan bay ushaqaynaysaa.
Mnemonic waa xirfado iyo istaraatigiyado shaqsigu u isticmaalo inuu si sax ah wax u xasuusto, waxay siyaadisaa shaqada maskaxda, waxaa soo saaray Gerald Miller 1967, waxuuna ku difaacay mnomnic inay siyaadiso xasuusashada si wanaagsan, waxuuna yiri “ardeydii isticmaashay xirfadaan waxay siyaadiyeen dhibcohoodii awal 77%”
Xirfadaha mnemonic ga way noocyo badan yihiin laakiin qayb ka mid ah baan halkaan kusoo qaadan doonnaa.
1. Connection mnemonic: waa istiraatigiyadda qofku isku xirayo xogta loo sheegay ama uu akhriy Xasuusasho aan koobnayn ey iyo xog kale oo uu yaqaan ama xifdisan yahay.
Markaad akhrisid muqaalka guud(Map) qaaradda Yurub rabtidna inaad xasuusatid, wadanka Italy qaab ahaan waxuu u eg yahay qaabka doonta marka si fudud baad u xasuusanaysaa.
2. Clustering (kooxayn): waa qaab loo kooxeeyo xogta si aad u xasuusatid, tusaale haddii aad rabto inaad xifdidid wadamada ku yaalla qaaradda Afrika, way kugu adag tahay inaad inta listi galisid xifdisid ama si dhaqso ah kusoo xasuusatid, balse hadii aad toban toban ukooxaysid ama jihooyinka ay ku yaalaan u kooxaysid, way kuu fududaan inaad xasuusatid xifdididna.
Waxaa jira kara farsamooyin intaan ka tiro badan, ardeygu hadduu isku dayo inuu la yimaado hab kale oo si fudud loogu xifdin karo waxii la akhriyey, wuu la imaan karaa.
Tags: Xasuusasho Aan Koobnayn - Si feejignaantu kuugu suurto gasho raac waddooyinkaan
Next post Xirfadaha Mnemonic - Sidee ku baran kartaa xirfadaan?
Previous post Kacaankii Hormarinta Burkiino Safo (1983-1987)